I-App Store ku-iOS 15 izofihla ukubuka kuqala kwezinhlelo zokusebenza ezifakiwe | Izindaba ze-IPhone
Kancane Apple Ihlala ivuselela futhi ithuthukisa isitolo sayo sohlelo lokusebenza, nakhu izama ukuthuthukisa kakhulu ikhwalithi yalezi futhi ngendlela efanayo izibophezele ekwenzeni ngcono ulwazi lomsebenzisi amakhasimende akwa-Apple analo ngamadivayisi awo, ngaleyo ndlela kwakheke uhlelo lwezemvelo oluphakeme kakhulu ikhwalithi.
Manje i-Apple ithuthukise isikhombimsebenzisi se-iOS App Store ngokufihla ukubuka kuqala kwalezo zinhlelo zokusebenza esesivele sizifakile ngenkathi sibuka okuqukethwe ku-iOS App Store. Le yindlela inkampani yeCupertino ehlose ngayo ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi ku-iOS 15, ngale mininingwane emincane esizoyazi ngenkathi sihlaziya uhlelo.
Siqaphele lezi zindaba ngenxa yomsebenzisi @lindokuhle kusuka ku-Twitter, u-Ilia Kukharev, ngubani ositholile ukuthi i-iOS App Store iku-iOS 15 iyakwazi ukufihla lokhu kubuka kuqala ngendlela yezithombe-skrini zalezo zinhlelo zokusebenza esesivele sizifakile. Iqiniso ukuthi indlela esebenza ngayo ilula impela futhi ayimeleli ukuthuthuka kwangempela noma ukwakhiwa kabusha kwe-iOS App Store, ezingeni lokuklama elihlala licishe lifane, kuyacaca ukuthi i-Apple ishiye idrowa lezindaba livulekile ngesikhathi seWWDC.
Ngakolunye uhlangothi, I-Apple namanje ayixazululi izinkinga ezinkulu ezikhona ngokuthuthuka kwe-iOS 14.6, okuze kube manje inguqulo yakamuva kakhulu yohlelo lokusebenza lwenkampani yeC Cupertino futhi echitha ibhethri labasebenzisi ngokoqobo. Sithole izinkulungwane zezikhalazo ku-Twitter ngisho nakuwebhusayithi yokusekela i-Apple lapho sithole khona abasebenzisi, kufaka phakathi nami, owafika ngaphambi kwe-iOS 14.6 ebusuku ngamanani angaphezulu kuka-25/30% webhethri, ngenkathi sesivele sijwayela ukubona okubomvu ibhethri elisixwayisa ngezinga lebhethri eliphansi ngokweqile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » I-App Store ku-iOS 15 izofihla ukubuka kuqala kwezinhlelo zokusebenza ezifakiwe